Allgedo.com » Qarax xoogan oo Kenya ka dhacay iyo Kenya oo maanta askar badan laga dillay
Qarax xoogan ayaa wuxuu saakay ka dhacay magaaladda Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari ee Dalka Kenya, iyadoo qaxaasi si weyn looga maqlay magaaladda Mandheera oo ay Soomaali badan deggan tahay.
Qaraxaan ayaa wuxuu ka dhacay meel ku dhaw Madrasatul Nuurul Islaam oo ku yaalla Xaafadda Laska ee Magaaladda Mandheera, isla-markaana qaraxaani ayaa waxaa lala beegsaday gaari ay saarnaayeen Ciidamadda Dowladda Kenya.
Qaraxaan ayaa waxaa mar kaliya si weyn looga maqlay Xaafadda Laska ee Magaaladda Mandheera, iyadoo hugunkiisu ay dareen xoogan ka muujiyeen shacabka ku kala dhaqan qeybaha magaaladda Mandheera.
Wararka laga hellaaya khasaaraha uu geystay qaraxaan ayaa waxaa la-sheegay in ka badan lix askari, oo ka mid ah Ciidamadda Dowladda Kenya inay geeriyoodeen, iyadoo ay jiraan tiro askar kale oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xaaladda Xaafadda Laska ay tahay mid aad u kacsan, waxaana jirtay baqdin xoogan oo ay qabaan shacabka Somaliyeed ee ku dhaqan Xaafadda Laska iyo xaafadaha kale ee ku dhaw dhaw.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa waxay Shabakadda Warbaahinta ee AOL ay u sheegeen, in maanta qarax xoogan uu ruxay meel ku dhaw Madrasatul Nuurul Islaam ee Xaafadda Laska ee Magaaladda Mandheera.
Majirto wax war ah oo ka soo baxay Dowladda Kenya oo maanta qaraxaan looga dillay loogana dhaawacyo askar badan, isla-markaana lama oga cidda dhabta ah ee qaraxaani ka dambeysay, balse waxaa dusha loo-saarinaayaa Xarakada Al Shabaab, bacdamaa ay hanjabaado xasaasi ah u jeedisay Dowladda.
C/qaadir Maxamed (Cagmadhige), AOL Updating News